युगसम्बाद साप्ताहिक - हाम्रो देशको राजनीति हाम्रो हातमा छैन - जनार्दन आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक
Wednesday, 11.13.2019, 04:02pm (GMT+5.5) Home Contact
हाम्रो देशको राजनीति हाम्रो हातमा छैन - जनार्दन आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक
Wednesday, 08.14.2013, 12:21pm (GMT+5.5)
० मुलुकको अहिलेको राजनीति कता जाँदैछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
झट्ट हेर्दा मुलुकको राजनीति संविधानसभाको निर्वाचन हुने, त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउने र एउटा निकास दिने भन्ने देखिन्छ र तयारी पनि त्यस्तै भैरहेको सुनिन्छ । तर, मुलुकको परिस्थिति हेर्दा अगाडिको बाटो त्यति सुगम छैन ।
० भनेपछि संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने यहाँ लाग्दैन ?
संविधानसभाको निर्वाचनको चुनाव हुनसक्छ कि सक्दैन भन्दा पनि यसले दिने परिणामतिर हाम्रो विश्लेषण हुनुपर्छ । मेरो आफ्नो विचारमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर पनि कुनै त्यस्तो निकास निस्केला जस्तो लाग्दैन । किनभने यो संविधानसभा नेपालको निमित्त कुनै नयाँ हैन । योभन्दा अगाडि चार वर्षसम्म संविधानसभा देखेकै हौं, भोगेकै हौं । त्यो संविधानसभाले नेपाल र नेपाली जनतालाई के दियो भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसले गर्दा संविधानसभाको निर्वाचन नै भएर पनि निकास निस्कन्छ जस्तो लाग्दैन । मलाई मात्र होइन आम नेपाली जनतालाई पनि यस्तै लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
० तपाई यस्तो विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ तर अगुवा राजनीतिक दलका नेताहरु संविधानसभाको निर्वाचनले मात्र मुलुकले निकास पाउछ भनेर एकोहोरो कराइरहेका छन् नि ?
हैन, उनीहरु कराइरहेका छन्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । अहिलेको प्रश्न के मात्र हो भने संविधानसभाको निर्वाचन दोस्रोपटक हुँदैछ । यसअघि संविधानसभाले चार वर्षसम्म काम गर्याे, त्यसले के दियो त ? त्यतिबेला त सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागिता थियो । अबको संविधानसभाको निर्वाचनमा केही पार्टीहरु वहिष्कार गर्ने, केही पार्टीहरु चुनावमा जाने भन्ने छ । अहिलेको अवस्थामा चुनावमा जाने र नजानेमा मुलुक विभाजित छ । संविधानसभाको चुनाव संसदको अथवा विधायिकाको चुनाव हैन, यसको ठूलो महत्व छ । यति महत्वपूर्ण चुनावको घोषणा भए पनि पूरा मुलुक चुनावमय हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा चुनाव वहिष्कार गर्ने तागत देखिइसकेको छ भने कसरी शान्तिपूर्ण र सहज रुपमा चुनाव होला ? चुनाव भइनै हाल्यो भने पनि त्यसले मुलुकको समस्या कसरी समाधान गर्ला भन्ने प्रश्न जीवितै छ ।
किन भने, एकथरिले “चुनाव भाँडछौं” भनिरहेका छन् । नमूना मतपेटिका फुटाएर यसको सुरुवात गरेको दृश्य हामीले देखेकै हौं । अर्को शक्तिले वहिष्कार गर्नेहरु गाउँमा पसे भने तिनीहरुलाई लखेट्नु भन्ने आदेश दिन्छन् । यो भीडन्तको मूड हो । यसले के देखाउँछ भने मुलुकमा चुनाव प्रचार प्रसारको प्रतिद्वन्द्वीता हुनुपर्नेमा भीडन्तमा प्रतिद्वन्द्वीता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव भएर पनि के, नभए पनि के भन्ने सवाल आम नेपालीको मनमा उठिरहेको छ । त्यसै भएर राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानसभाको अर्को निर्वाचन भएपछि सबै समस्याको समाधान हुुन्छ भने पनि देशको परिस्थिति हेर्दा अगाडिको बाटो त्यति सहज होला जस्तो मलाई चाहिं लाग्दैन ।
० लामो समयदेखि राजनीतिक विश्लेषण गर्दै आउनुभएको नाताले अब मुलुकको निकासको बाटो के हो जस्तो लाग्छ ?
हामीहरुले सर्सस्ती हेर्दा देशमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचमा न्यूनतम कार्यक्रमहरुमा सहमति खोज्नुपर्छ । अहिले जसले चुनावमा भाग लिदैनौं भनिरहेका छन् उनीहरुको के कति माग पूरा गर्न सकिन्छ त्यसको प्रयास गर्नुपर्छ । एउटा सहमतिको बाटो निकाल्नुपर्छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने अहिले मोटामोटी रुपमा मुलुक संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने जुन बाटोबाट हिंडिरहेको छ त्यो कुरालाई सफल बनाउने हो भने संविधानसभालाई व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको निमित्त सबैभन्दा पहिले प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका निमित्त केही समय चुनाव सारेर हुन्छ कि, वृहत किसिमको भेला बोलाएर हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ ती बाटाहरु खोज्नुपर्छ । अहिले दुबै तर्फबाट जुन किसिमले भीडन्तका संकेतहरु आइरहेका छन् त्यसले राम्रो गर्दैन ।
० मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुबीच किन सहमति हुन सकेन र किन मुलुक ओरालो लागिरह्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
यसको भित्री कारण के हो त्यो त थाहा छैन तर बाहिरबाट हेर्दा मुलुकका ठूला पार्टीहरुकै हातमा देशको भविष्य छ । त्यसकारण यहाँ सहज रुपमा निकास निस्कियो भने त्यसको जस तिनीहरुलाई नै जान्छ र आजको जुन अप्ठ्यारो छ यसले मुलुकलाई योभन्दा बढी भूमरीमा पार्दै जाने अवस्था आयो भने यसको अपजस पनि उनीहरुले नै लिनुपर्छ । जसको हातमा मुलुकको लगाम छ उसले नै मुलुकले निकास पायो भने जस पाउँछ, नसके अपजस पनि उसैले पाउँछ ।
० तर राजनीतिक दलहरुले निकास दिन सकिरहेका छैनन् । यसको कारण के हुनसक्छ ?
राजनीतिक दलका नेताहरुको भित्री इच्छा संविधानसभाको निर्वाचन गरेर मुलुकलाई एउटा निकास दिने भन्ने गन्तव्यमा नलागेर कसरी सत्तामा जाने र कसरी आफ्नो पार्टी, आफ्ना मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउने र सत्तामा पुगेर कसरी आर्थिक लगायत अन्य लाभ लिने भन्ने बाहेक मूल कुरातिर ध्यानै गएन । त्यसकारण अहिलेसम्म पार्टीहरुबीचको विवाद सत्ताकै लागि हो । उनीहरुले भनेअनुसार बाँडफाँड गरेर जो अहिले सरकार बनाएको छ त्यो पार्टीका मान्छे हैन भने पनि उनीहरु चार दलले बाँडफाड गरेर नै बनाएका हुन । उनीहरु दिलोज्यानले सरकार टिकाउन लागिपरेका छन् । जो यो बाँडफाडमा संलग्न छैन उनीहरुले चाहिं पहिला यो सरकार विघटन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।
भनेको मतलब के हो भने सबैको ध्यान सत्तातिर नै छ । सत्ताबाट हुने फाइदातिर नै सबैको दृष्टिकोण भैसकेपछि कसरी मुलुक बनाउने, कसरी संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, मुलुकलाई निकास दिने, मुलुकलाई कसरी बचाउने भन्नेतिर कसैको ध्यानै गएन ।
० त्यसो भए संविधानसभाको निर्वाचनलाई कमाइखाने भाँडो बनाइएको हो ?
संविधानसभाको निर्वाचन हुनु, संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुरालाई नेपाली जनताले स्वागत गरेका थिए । तर, संविधानसभाबाट संविधान बनेन । अहिले फेरि संविधानसभाकै निर्वाचन गर्न लडाइँ भैराखेको छ । निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने टुंगो छैन । अब हुने राम्रो–नराम्रो सबै कुराको जस–अपजस यिनै पार्टीहरुले लिनुपर्छ । हामी सबैले देखिराखेका छौं कि हाम्रो देशबाट निकास निस्कदैन भनेर । मैले उहिल्यैदेखि लेखिरहेको छु, बोलिरहेको छु कि ‘नेपालको राजधानी अब काठमाडौं होइन दिल्ली भयो’ भनेर । कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्याे भने त्यो काठमाडौंमा हुनै सक्दैन, दिल्लीमा हुने गरेको छ । अहिलेसम्म त्यही देखिएको छ ।
माओवादीले गरेको सबभन्दा ठूलो निर्णय गरेको भनेको १२ बुँदे सहमति हो, त्यो दिल्लीमै भयो । अहिले पनि दिल्ली जान्छन्, फर्किएर आएपछि अब यहाँ चुनाव मंसिर चारमै गर्नु भन्या छ भन्छन्, कोही संघीयता यस्तो हुनुपर्छ भन्या छ भन्छन् । सिकाउने सबै उतै छन् । चुनाव चारको साटो पाँच या छ गते गर्ने त हाम्रो अधिकारको कुरा हो नि, संघीयता कस्तो बनाउने भन्ने पनि हाम्रै अधिकार हो । उनीहरुले भन्ने हैन नि । यसले के देखाउँछ भने निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो हातमा कम छ ।
० यहाँको विश्लेषण अनुसार मुलुक हाम्रो हातमा छैन र नेताहरु निर्देशित रुपमा काम गरिरहेका छन् हो ?
नेपाली नेताहरु (सबैलाई नभनौं) हरेक पटकको महत्वपूर्ण निर्णय गर्न उहिल्यैदेखि नै दिल्ली पुग्ने गरेका हुन् । नेपालमा नाकाबन्दी गरिदिनुपर्याे भनेर पनि दिल्ली पुगे, दिल्लीले नाकाबन्दी गरिदियो, एक मधेश एक प्रदेश भएन भने मेरो मुटु चिरिन्छ भनेर भारतीय काउन्सिलरले वीरगञ्जमा बोले । एक मधेश एक प्रदेश भएन भने हाम्रो मुटु चिरन्छ भनेर त यहाँका मधेशीले पो भन्नुपर्ने, भारतीयको मुटु किन चिरिने ? उनीहरुले पनि त्यसरी नै भन्ने र यहाँका नेताहरुले पनि त्यस्तै गर्ने । खुर्सीदलाई भेट्न नेपाली नेताहरु कसरी लाइन लागेर होटलमा पुगे ? यी सबै कुरा पत्रपत्रिकामा आइसकेका छन् र आम नेपाली जनतालाई थाहा छ कि हाम्रो देशको राजनीति हाम्रो हातमा छैन ।
० अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्ने ‘रोडम्याप’ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति थियो । त्यो रोडम्यापले मुलुकलाई निकास दिएन देखिएन । १२ बुँदेको रोडम्याप असफल भएको हो ?
खै त्यो १२ बुँदे सहमतिको रोडम्याप के हो मलाई थाहा छैन । त्यसको भावनामा हाम्रा नेताहरु पनि अल्मलिएका हुन् कि ? जो दिल्ली जान्छन्, भारतीय नेताहरुसंग भेटछन् त्यसको भित्री कुरा त उनीहरुलाई नै थाहा होला । हामीले त पत्रपत्रिकामा पढे अनुसार र बुझे अनुसार हाम्रो हातमा केही पनि छैन । अहिले नेपाल असफल राष्ट्रतिर गैरहेको छ । वेथिति, शान्ति सुरक्षाको अभाव लगायत यावत कुराहरु जे भैरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनौं । सरकार नै अरुले बनाउँछ भनेर यहींका पार्टीहरुले बताइरहेका छन् । अहिलेको सरकार विदेशीले नै बनाएको हो भनेर एकथरि पार्टीले भनिरहेकै छ । अहिलेको सरकार विदेशीले नै बनाएको हो भनेर एकथरि पार्टीले भनिरहेकै छ । हामीले देखेकै छौं कि १७ पटक चुनाव गर्दा पनि हामी प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैनौं । यस्तो काम धेरै अगाडिदेखि भैरहेको छ ।
० अब मुलुक नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो ?
अहिले मुलुक जुन प्रकारले चलिरहेको छ यो ब्रेक फेल भएको र इन्धन सकिएको गाडी ओरालो गुडिरहेको अवस्था हो । विग्रिएको गाडीलाई ओरालोमा गुडाउन इन्धन चाहिंदैन । हामीले ओरालोमा गुडिरहेको गाडी देखेर सब ठीकठाक छ भन्ने ठानिरहेका छौं । गाडी गुडिरहेको हुँदा इन्धन पनि छ, ब्रेक पनि ठीकठाक छ भन्ने भ्रम परेको छ । अहिले त्यस्तै अवस्था छ । चुनाव हुन्छ भनिएको छ, नेताहरु चुनावी भाषण पनि गरिरहेका छन् । पार्टी प्रवेशको लहर पनि चलिरहेको छ । यो सब कुरा जो घटित भैरहेको छ त्यसलाई हामीले मुलुक चलिरहेको ठानेका छौं तर मुलुक ओरालो लागेको मात्र हो ।
० दुर्घटना भयो भने के हुन्छ त मुलुकको अवस्था ?
गाडीको दुर्घटना भैसकेपछि यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न । जे पनि हुनसक्छ ।
० कतिपयले यो सब सिक्किमीकरण, भुटानी करणको अभ्यास हो भनिरहेका छन् । यहाँलाई के लाग्छ ?
हैन, यो सिक्किमीकरण वा भूटानीकरणभन्दा पनि नेपाली करणका लागि भैरहेको हो भन्ने आशा म गर्छु । हामीले के अपेक्षा गर्नुपर्छ भने मुलुकको यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पार लगाउन कोही न कोही नेपाल आउँछ भनेर ।
० त्यसो भए राजनीतिले कोल्टे फेर्ने परिस्थिति आयो । त्यसका लागि अलिक पछाडि फर्कनुपर्छ अथवा राजतन्त्र ब्यूँताउनुपर्छ पनि भन्नेहरुलाई बल पुगेको हो ?
केही न केही त हुनै पर्याे नि । ओरालो लागेको गाडीलाई सधैंभरि यसै गरी छाडदिन त भएन । कोही न कोही बहादुर मान्छे गाडी र यात्रु बचाउन निस्कन्छ । मुलुक कसैको ठेक्कामा परेको हैन नि । जहाँसम्म राजसंस्थाको करा छ त्यसलार्ई ब्यूताउने अथवा नब्यूताउने भन्ने हाम्रो हातमा छैन । २०६३।०६३ मा राजाको अवस्था सबैले छिःछिः र दुरदुर गर्ने थियो । अहिलेको अवस्था के छ ? अहिले कसरी त्यो अवस्था भएन ।
हिजोको अवस्था अहिले छैन । पूर्व राजा हिंडिरहेका छन्, उनको स्वागत भैरहेको छ । राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टी पनि हिजोकोभन्दा बलियो हुँदै गैरहेको देखिन्छ । यहाँ कम्युनिष्टहरु नै ‘कि त हामीसंग एजेण्डा छ कि राप्रपा नेपालसंग छ’ भन्न थालेका छन् । अर्काथरि माओवादीहरु ‘राजावादीहरुसंग सहकार्य गर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । यसले एउटा नयाँ परिस्थिति त सिर्जना गर्याे नि ? यो हामीले बनाएको हो ?